quick လမ်းညွှန်: မည်သို့ရန်ခရီးသွား Cinque Terre ရထားဖြင့် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > quick လမ်းညွှန်: မည်သို့ရန်ခရီးသွား Cinque Terre ရထားဖြင့်
အီတလီနိုင်ငံလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ခရီးသွားဧည့်နေရာများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ. ပြည်သူ့စိတ်ကူးစားစရာဘို့တိုင်းပြည်စုပြုံ, ယဉျကြေးမှု, နှင့် ကြွယ်ဝသောသမိုင်း. တကယ်တော့, သင်ပင်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ကျက်သရေကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အပိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးများသို့သွားရောက်ရန်မလိုပါ. A ကောင်းဆုံးသာဓကဒီတစ်ခုဖြစ်သည်၏ seductive လမ်းပိုင်းဖြစ်ပါသည် အီတလီ Riviera အဖြစ်လူသိများ Cinque Terre. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လူကြိုက်များဦးတည်ရာ ခေတ်သစ်အသက်တာ၏ဖိစီးမှုအရှိန်အဟုန်ကနေမြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဆက်ပြတ်မှုပျော်မွေ့ချင်သောလူများအတွက်. အထီးကျန်မြို့ရွာတွေအများကြီးအီတလီ၏ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာရှိပါတယ်နေစဉ်, Cinque Terre ၏မြို့ရွာဝေးများကလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း. ဤသည်၌အကျိုးစီးပွားကြောင့် စိတ်ကူး destination သို့, တစ်ဦးကရထား Save ရထားအားဖြင့် Cinque Terre ကြည့်ဖို့ဘယ်လိုအပေါ်တစ် ဦး အမြန်လမ်းညွှန်ထားရှိခဲ့ပါသည်.
အဘယ်ကြောင့် Go ကိုအားဖြင့်ရထား?
ရထားကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာသည်အဘယ်ကြောင့် Cinque Terre တွေးမိလိမ့်မယ်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းအတော်များများလှည့်ခရီးသည်များ. ကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းသောဒေသအသံမှမောင်းနှင်, မှန်သော? မှားသော. ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်, Cinque Terre တက်စေသည်ဘာကိုသိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. Cinque Terre အဓိကအားငါးငါးဖမ်းကျေးရွာများအထိဖန်ဆင်းထားသည်, ဤအရပ်မှနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. (ငါးမြေများ). ဤရွေ့ကားကျေးရွာများဖြစ်ကြသည် Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, နှင့် Monterosso အယ်လ် Mare. သူတို့ဟာမူလကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်အလွန်သေးငယ်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူငါးရဲတိုက်ခဲ့ကြ. ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့, ဤအကျေးရွာပေါင်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ. အဆိုပါကျေးရွာများဖြစ်ကြသည်, မကြာသေးမီကသည်အထိ, အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး တောင်တက်လမ်းခရီး သာသုံးစွဲနိုင်ခဲ့ကြ ရထားလမ်းအားဖြင့် ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်.
သူတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကဲ့သို့ဤရွေ့ကားရွာတွေအထီးကျန်မှုတွေအတွက်မဟုတ်တော့များမှာ. သို့သျောလညျး, သူတို့နေဆဲအများအပြားပျော်မွေ့သောဝေးလံခေါင်ဖျားသောခံစားမှုထိန်းသိမ်းရန်. လမ်းများယခုရွာအချို့မှဦးဆောင်နေကြ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းကျဉ်းမြောင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လမ်းများအသစ်ဖြစ်ကြသောသူတို့အဘို့အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးနိုင်ပါတယ်. သငျသညျကားဖြင့်ရွာရောက်ရှိလျှင်, သငျသညျကားဖြင့်သူတို့ကိုအကြားခရီးသွားလာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. မည်သည့်အန္တရာယ်နှင့်အဆင်မပြေရှောင်ရှားရန်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထား၏အရှိဆုံးအဆင်ပြေသည့်စနစ်နှင့်အတူရွာသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးက.
သငျသညျအဆိုပါ Cinque Terre ရထားလိုင်းကနေဘယျလိုမြျှောလငျ့နိုငျ?
အဆိုပါ Cinque Terre ရထားလိုင်းကိုခြောက်လမှတ်တိုင်များရှိပါတယ်. ဤအမှတ်တိုင်များ၏အမိန့်, La Spezia ဖြစ်ပါသည် (ထိုဒေသတွင်ဗဟိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာ), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ Levanto. ဒီခရီးစဉ်ကအတော်လေးတိုတောင်းဖြစ်ကြပြီးထိုမျှလောက်အချိန်ယူကြဘူး. Riomaggiore ဖို့, La Spezia ကနေခရီးခန့်ကြာ 10 မိနစ်များ. အဆိုပါ Cinque Terre မြို့များအကြားအဆိုပါခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်. များမှာ5မိနစ်အသီးအသီး. ဤရွေ့ကားရထားသည့် 1870 မှမှောင်မိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထိုရက်စွဲပြန်ကတဆင့်သွားပါ. ဒါဟာအမှောင်မှတဆင့်သွားပြီးရင်ရုတ်တရက်အရောင်ကိုမြင်လျှင်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံနှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များ မြေထဲပင်လယ်၏.
ဤရွေ့ကားရထားမကြာခဏအဖြစ်တဦးတည်းကိုမျှော်လင့်မယ်လို့အဖြစ်နေရာများအကြားရေတိုအကွာအဝေးပေးထားကြသည်မဟုတ်. သူတို့ကအများအားဖြင့်တိုင်းနာရီတစ်ကြိမ် run, ဒါပေမဲ့ဒီအခြိနျမှနျမှအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်. သို့သျောလညျး, သင့်ရဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်အခါကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မေးမြန်းဖို့အမြဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဒီအချိန်ဇယားနှင့်ခရီးသွားအချိန် သိ. အပြင် မီးရထားလမ်းကြောင်း, သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်အလွန်အရေးပါသည်. သင်အသုံးပြုနိုငျသောရထားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် validation ကိုစက်တွေရှိပါတယ်. သငျသညျကားပြုသမျှအားလုံးသည်ငယ်အဝါရောင်စက်၏ slot ကသို့လက်မှတ်၏ကျဉ်းမြောင်းသောအဆုံးလျှောနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းကိုနားထောငျဖို့စောင့်ဆိုင်း.
1. quick လမ်းညွှန်နိုင်ရန် Cinque Terre အားဖြင့်ရထား: Riomaggiore
Riomaggiore တစ်ခုခုကိုပထမဦးဆုံးမှတ်တိုင်ရှိလိမ့်မည် (သငျသညျ, La Spezia ကနေဦးဆောင်နေလျှင်) ဒါမှမဟုတ်ပဉ္စမမှတ်တိုင် (သငျသညျ Levanto ကနေဦးဆောင်နေလျှင်). သို့သျောလညျး, အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အများအပြား Cinque Terre ဧည့်သည်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရပ်တန့်ဖြစ်မယ့်, အဲဒီမှာရဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက. Riomaggiore သည့်ကျေးရွာငါးရွာ၏အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါသည်, အဓိကပန်းခြံရုံးရှိစဉ်ကတည်းကကြောင့်တရားမဝင်မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါအဆောက်အဦးအပေါငျးတို့သမတ်စောက်သောချောက်အပေါ်သို့ဆောက်ထားတဲ့နေကြတယ်, အဆိုပါအလွန်သေးငယ်သောဆိပ်ကမ်းအားလုံးကိုလမ်းကို. pastel အိမ်များကွာ၏မြင်ကွင်းတစ်ခုပါသည်နှင့်အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာနေဖို့ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာနေဝင်ချိန်မှာတွေ့မြင်ရန်စိတ်ကူးမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့အထူးယခုအချိန်တွင်မျှဝေချင်ကြောင်းစုံတွဲများများအတွက်တွေ့မြင်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်.
la Spezia Riomaggiore ရထားမှ
Florence Riomaggiore မှရထား
Riomaggiore ရထားမှ Modena
Riomaggiore ရထားမှ Livorno
Manarola ပေါ်လာပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာ Cinque Terre ကမ်းရိုးတန်းသို့ဆင်းဖိတ်ဖို့တဲ့အသနားခံစာရွာဖြစ်ပါသည်. ရောင်စုံအဆောက်အဦးများအဆင့်ဆင့်၏ထင်ယောင်ထင်မှားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လှပသောမျက်မှောက်. ဒါဟာအီတလီယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကြမ်းတမ်းသဘာဝတရား၏ပြီးပြည့်စုံရောစပ်ဖြစ်ပါသည်. သင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမြင်အတွက်ယူပြီးတာနဲ့, သင်ရွာစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်. Manarola တစ်လှေချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်နှင့်တစ်ဦးရေကူးအပေါက်တပ်ဆင်ထားတဲ့သေးငယ်တဲ့ဆိပ်ကမ်းရှိပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စုံလင်သောအရပျ တစ်ဦးရေကူး ယူ. အချို့ကမ်းပါးရေငုပ်လေ့ကျင့်ဖို့. ဆိပ်ကမ်းပူးတွဲ Manarola ၏မြို့သားတို့ပိုင်သည်ဟုမြောက်မြားစွာငါးဖမ်းလှေများမှာ. ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အစာစားခြင်း၏အစဉ်အလာသည်အသက်ရှင်သေးခြင်းနှင့်ရွာ၌အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်း.
la Spezia Manarola ရထားမှ
Manarola ရထားမှ Riomaggiore
Manarola ရထားမှ Sarzana
Manarola ရထားမှ Levanto
3. quick လမ်းညွှန်နိုင်ရန် Cinque Terre အားဖြင့်ရထား: Corniglia
ငါးကျေးရွာများအသီးအသီးက၎င်း၏အချို့သောကျက်သရေရှိပါတယ်. ကကမ်းနားအပေါ်မဟုတ်ပါဘူးကတည်းက Corniglia အထူးဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, အဘယ်အရာကိုကကမ်းခြေများတွင်ကင်းမဲ့, ပိုထက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အလှအပနှင့်အတူတက်သည်စေသည်. Corniglia ဟာပိုပြီးဝေးလံခေါင်သီခံစားရသည် အခြားရွာများ. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထက်ပိုစိတ်အေးလက်အေးနှင့်ဒေသခံလေထုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါရွာမကြာခဏယင်း၏ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလမ်းကြောင်းများအတွက်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်. လှေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်အခြားကျေးရွာများမတူဘဲ, Corniglia တောင်ကိုသာအစိုးရထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်မျှမတို့ပင်လယ်လက်လှမ်းရှိပါတယ်. ဒါဟာရောက်ရှိဖို့ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Cinque Terre လမ်းကြောင်းကိုသို့မဟုတ်ခွရန်ဖြစ်ပါသည် ရထားယူ. သို့သျောလညျး, ရထားသင်သည်မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုမနှမြောလိမ့်မည်ဟုမှတ်စုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ကျေးရွာအလယ်ဗဟိုသို့ရောက်ရန်နှင့်ရွာငယ်လေးမှကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်လှေကားအချို့ကိုသင်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်.
Corniglia တစ်ဦးကိုသင်ပတျဝနျးကငျြတောင်ကုန်းအများစုကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်စိတ်ကူးရှုမွငျခနှင့်ကျယ်ပြန့်သမုဒ်ဒရာရှိပါတယ်. ရွာအတွက် belvedere Cinque Terre ၏ဂုဏ်အသရေ၌ကျင်လည်ခြင်းနှင့်ယူမယ့်ကြီးမြတ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်ရွာကမ်းလှမ်းမှုအရသာကိုခံစားနိုင်မလုပ်ပေးပြီးတာနဲ့, အံ့သြဖွယ် pesto ကနေအရသာစပျစ်ရည်ကိုမှ. Corniglia စပျစ်ရည်ကိုအောင်၏ကြွယ်ဝသောသမိုင်းရှိပြီး, သင်ဒေသခံတွေမိတ်ဖွဲ့ဖို့ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းလျှင်, သငျသညျအရသာနှင့်၎င်းတို့၏ဝိုင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်.
la Spezia Corniglia ရထားမှ
Florence Corniglia မှရထား
Manarola Corniglia မှရထား
Corniglia ရထားမှ Levant
Vernazza Cinque Terre မသာအတွက်အလှဆုံးကျေးရွာပေါင်းတစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်, အီတလီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးပေမယ့်. ဒါဟာခရီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌အများအပြားကျဆုံးခြင်းကိုဧကန်အမှန် Cinque Terre ၏လှည့်ခံရသောရတနာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအခြားကျေးရွာများကင်းမဲ့ကြောင်းပိုမိုကြော့နှင့်ရိုးရာခံစားရှိပါတယ်. အဆိုပါခြွင်းချက်အစားအစာနှင့်အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းများနဲ့ပေါင်းစပ်, သငျတို့သတဲ့ဒုတိယခရီးစဉ်ကိုအာမခံမယ့်နေရာအရပ် get. လာသောအခါ Vernazza အတွက် Doria ရဲတိုက်သွားရောက်သေချာအောင်လုပ်ပါ. ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရွာဆယ်စုနှစ်၏လူများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောနောက်ဆုံးမူရင်းတာဝါတိုင်များ၏တဦးတည်းပါရှိသည်.
Vernazza ရထားမှ Corniglia
Florence Vernazza မှရထား
Bologna Vernazza မှရထား
Vernazza ရထားမှ Riomaggiore
5. quick လမ်းညွှန်နိုင်ရန် Cinque Terre အားဖြင့်ရထား: Monterosso အယ်လ် Mare
Monterosso အယ်လ် Mare ခြောအဆိုပါ Cinque Terre အတွက်မြို့ကဲ့သို့အများဆုံး touristy နှင့်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကားများရှိပါတယ်, ခရီးသွားဧည့်များအတွက်စုံလင်သောဟိုတယ်နှင့်ကြောကမ်းခြေ. သငျသညျအီတလီ၏ဤအံ့သြဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှုလိုလျှင်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးခေတ်မီ Vibe ပိုနှစ်သက်, ထို့နောက် Monterosso သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. Monterosso ညနေခင်းအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသောသောလမျးလြှောကျသှားခွငျးရှိပါတယ်, ပင်ပိုကောင်း, သူတို့မည်သူမဆိုပင်လယ်စာကိုခံစားစေတော်မူမည်ကြောင်းဒဏ်ငွေထမင်းစားခန်းရှိ.
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, Cinque Terre ထူးခြားတဲ့အီတလီအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်သောကမ်းလှမ်းမှုကိုဧည့်သည်တစ်ဦးတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ဒါဟာတစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုကတိပေးကြောင်းငါးထူးခြားတဲ့ရွာတွေရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့ရထားများအတွက်စာအုပ်တစ်ဦးကလက်မှတ် မိမိကိုယ်ကိုအခြားမည်သည့်အရာများနှင့်မတူသည့်စွန့်စားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါစေ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “quick လမ်းညွှန်: မည်သို့ရန်ခရီးသွား Cinque Terre ရထားဖြင့်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-cinque-terre-train/ – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
cinqueterre europetrains europetravel eurotrip trainjourney Tranride ရထားအကြံပေးချက်များ travelitaly